U-SARS uzoyithathela izinyathelo eyencwadi ebhalwe ngoMengameli Zuma | News24
U-SARS uzoyithathela izinyathelo eyencwadi ebhalwe ngoMengameli Zuma
Cape Town – ISouth African Revenue Service (SARS) icabanga ukuthathela intatheli uJacques Pauw kanye neSunday Times izinyathelo zomthetho.
Incwadi kaPauw, esihloko sithi The President’s Keepers iveza izinsolo zokuthi uMengameli Jacob Zuma wayekhokhelwa ngusomabhizinisi uRoy Moodley u-R1m njalo ngenyanga ngo-2009 esevele esengumengameli, ngaphandle kokudalula le mali kwa-SARS. ISunday Times yashicilela isiqeshana esisencwadini kaPauw.
"U-SARS uthanda ukucacisa ukuthi ukhathazekile kakhulu ngokushicilelwa kwemininingwane eyimfihlo yomuntu okhokha intela nokungukwephula iTax Administration Act (TAA) 28 ka-2011, ikakhulukazi isigatshana 69 esikwenza lokhu kube yicala," kusho isitatimendme esikhishwe ngoLwesihlanu.
OLUNYE UDABA:BUKA: Kuhlokome iPhalamende uZuma ephendula uMaimane
U-SARS uthi ngaphansi kwe-TAA kuyicala ukuvezwa kwale mininingwane ngaphandle kokugunyazwa yinkantolo, futhi u-SARS ubona kuwukwephula umthetho ukushicilelwa kwalolu lwazi encwadini kanye nakuSunday Times.
"Ngakho-ke, u-SARS kubalulekile ukuthi uyisukumele indaba yokwephulwa kwe-TAA kwenziwa nguMnu Jacques Pauw mayelana nezinsolo ezithi uCommissioner Tom Moyane usiza uMengameli Zuma ukuba abalekele ukukhokha intela."
U-SARS uthi uzimisele ngokuthatha izinyathelo zomthetho uphinde uphenye uPauw neSunday Times mayelana nalokhu.
NgoLwesine ephendula imibuzo ePhalamende, uMengameli Zuma uthe akekho umuntu owake wamnikeza imali wangayidalula.
NgoLwesihlanu, iState Security Agency (SSA) iveze ukuthi yethumele incwadi kuPauw izwakalisa ukuthi kumele ahoxise le ncwadi njengoba ithi kunokuthile okuqukethwe yiyo okwephula i-Intelligence Services Act.